२०४६ मा वीरेंद्र ले बहुदल बारे विज्ञ हरुको टोली बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन?
२०४६ मा वीरेंद्र ले बहुदल बारे विज्ञ हरुको टोली बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन? कि बहुदल हुन्छ भनेका हुन? अहिलेको मधेस आंदोलन को प्रमुख माग नै एक मधेस दो प्रदेस हो। के को विज्ञ? कस्तो विज्ञ? कताको विज्ञ? खुरुक्कन यो सात प्रदेस मा जाने।